Qof madax raadinaya haddii aad aragto xaqiisii ayaa maqan! | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada Qof madax raadinaya haddii aad aragto xaqiisii ayaa maqan!
Qof madax raadinaya haddii aad aragto xaqiisii ayaa maqan!
(Hadalsame) 06 Juun 2018 – Cumar Binu khidaab (RC) Hoggaamiyihii Muslimiinta (Amiirkii Muuminiinta) ayaa isagoo maalin kaligii ah la waydiiyay aaway ciidankaagii ilaalada ama gaarka kuu ahaa iyo dadweynaha danta kaa lahaa ee xarumaha madaxda u talisa hor tubnaan jirey,markasuu ku jawaabay:”Dadku madaxda maraadinayaane xaqooda ayay raadinayaan, anna xaqoodii baan siiyay sidaas baanan ciidan i ilaaliya ugu baahneyn dadkuna aysan ii raadineyn.”
Xigmadan waxaan walaal ka qaadan karnaa in qofka madaxda ah markuu u cadaalad falo ummadda uu xukumo oo xaqoodu uu siiyo in uusan u baahneyn gawaari labaatan ka badan oo tikniko ah iyo ilaaliyeyaal tiro badan oo daba yaaca iyo dadka raadinaya oo xafiiskiisa buux dhaafiya.
ILLAAHAY soomaaliya ha u keeno hogaamiye u cadaalad fala, wadani ah oo xoolaha ummadda aan boobin, qabyaalad ku dhaqanka ka fog ummadda mideeya, dadka jilicsan ee masaakiinta ahna u naxariista oo si gaar ah wax u tara.
Previous articleAARSI CAJIIB AH: DAAWO…De Gea oo diidey inuu u sacbiyo Raysal Wasaaraha Spain + Sawirro (Sabab?)
Next article”Sax bay ahayd inaan diidno la ciyaarista Israel” – Gonzalo Higuain
DHEGEYSO: Faa’iso Maxamuud oo sharraxday sababta ay MCC & Horseed ula dabbaaldegtey (Kooxaha ay caalamka ka taageerto)
(Muqdisho) 03 Agoosto 2021 - Faa'iso Maxamuud oo ah gabar dhallinyaro ah oo taageere ah ayaa si wayn loogu xifaalaynayaa baraha bulshada 24-kii saacadood...